iphone ပဲ တောက်လျှောက် သုံးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု – DigitalTimes
iphone ပဲ တောက်လျှောက် သုံးဖြစ်တယ် ဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင် ပိုင်ဖြိုးသု
အနုပညာပျိုးခင်းကနေရွေးချယ်လိုက်တဲ့ မင်းသမီးတွေထဲက တစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ သူကတော့ သရုပ်ဆောင်ပိုင်ဖြိုးသု ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သုသုနဲ့တွေ့တုန်း လက်တလောအနုပညာလှုပ်ရှားမှု နဲ့အတူ ဖုန်းအကြောင်းကို မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလေးအကြောင်း ပြောပြပေးပါလား။
ဒီနေ့ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားက လှရွှေနှင့်သူ၏သူငယ်များ အဲဒီကားမှာ ညီမကရုပ်ဆိုးဆိုးကောင်မလေး အခြောက်ကိုယောင်္ကျားလေး ပြန်ဖြစ်စေချင်ပြီး လိုက်ကြိုက်တဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်ထားပါတယ်။
Q. ဟိုတလောကရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲအကြောင်း ပြောပြပေးပါလား။
ဇာတ်လမ်းတွဲနာမည်က ပန်းတစ်ပွင့်စီးချင်း၊ ဒါရိုက်တာကဆရာမင်းခိုက်စိုးစံ ဇာတ်ညွှန်းက မထက်မြတ်နိုင်ဇင်၊ အောင်ပြည်ထုတ်လုပ်ရေးက ရိုက်တာ ပါဝင်တဲ့သူတွေက ညီမရယ် မေဘရဏီသော်၊ ခင်သဇင်၊အန်တီထူးမွန် ပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေ ထဲမှာဆိုရင် ဦးကိုကိုလင်းမောင်၊ ဦးရန်ကျော်၊ ကိုစိုးရန်အောင်၊ ထက်ကိုကိုလင်း၊ မာကိုလည်း ပါတယ်။
Q. ညီမလေးပါဝင်ရတဲ့ ကာရိုက်တာကရော…
ညီမက ရွှေဇဝါဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ ရှေ့နေအမျိုးသမီးတစ်ယောက် အမှန်တရားဘက်က အမြဲရပ်တည်တယ်။ ညီမလိုက်တဲ့ အမှုတိုင်းက နိုင်တယ်။ မှန်လည်း မှန်ကန်တယ်။ လိုက်ရင်လည်း မှန်တဲ့သူဘက်ကပဲ အမြဲလိုက်ရတယ်။ မော်ဒယ်မလေး သတ်ခံရတဲ့ အမှုကျမှ တရားခံဘက်က လိုက် ရတယ်။
Q. ဇာတ်လမ်းတွဲပုံစံက ဘယ်လိုလဲ။
လျို့ဝှက်သည်းဖို့ပုံစံမျိုး လူသတ်မှုကို အဓိကပြီး ဇာတ်လမ်းစင်ထားတာပါ။
မြန်မာအသံ က လွှင့်မှာပါ။
Q. ဒီဇာတ်လမ်းတွဲက ပထမဆုံးရိုက်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲလား။
ဟုတ် ပထမဆုံးပါ။ ရှေ့မှာတော့ Main Series လေးတစ်ခုတော့ ရိုက်ဖူးတယ်။ ဒါရိုက်တာကိုဇော်ဇော် နဲ့ ရာမဇာတ်တော်အကြောင်း တစ်ခုတော့ရိုက်ဖူးတယ်။
Q. ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ရတဲ့ အတွေ့အကြုံလေး ပြောပြပါလား။
ဇာတ်လမ်းတွဲက ဒီကားပြီးရင် ပြန်ဝင်ရအုံးမှာ မပြီးသေးဘူး။ ဇာတ်လမ်းတွဲဆိုတော့ ရက်တွေ အများကြီးရိုက်ရတယ်။ ဒီကာရိုက်တာထဲမှာပဲ အကြာကြီးနေရတော့ အသားတော့ကြေနေပါပြီ။ ရှေ့နေတဲ့ ပတ်သက်တဲ့စာတွေ ကျက်ရတာအရမ်းခက်တယ်။ အပြင်က ရှေ့နေတွေကိုတောင်
လေးစားမိတယ်။ ရှေ့နေအသုံးနှုန်းတွေက အရမ်းခက်တယ်။ ဥပဒေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုယ်မသိတာတွေ လည်း သိခွင့်ရတယ်။
Q. အခုကိုင်ထားတဲ့ ဖုန်းBrand ကိုပြောပြပေးပါလား။
Q. ဖုန်းရော ခဏခဏလဲကိုင်ဖြစ်လား။
ညီမက ဖုန်းအကြောင်း သိပ်နားမလည်တော့ သိပ်ပြီး ပြောင်းမကိုင်ဖြစ်ဘူး။ အခု ကိုင်တဲ့ 6Plus တောင် အိမ်က ညီမ မြှောက်ပေးလို့ကိုင်ဖြစ်တာ အခုချိန်ထိမလဲဘူး။ နှမြှောလို့ ကိုယ်ကသူများလိုလည်း ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ကြီး မသုံးတတ်ဘူး။
Q. ဖုန်းကို ကိုယ်ရဲ့တစ်နေ့တာမှာ ဘာတွေသုံးဖြစ်လဲ။
ညီမအတွက် ဖုန်းက ဖုန်းပြောတာရယ်၊ Facebook သုံးတာရယ် ၊ တချို့ app တွေတော့ Download လုပ်ဖြစ်တယ်။ google သုံးဖြစ်တယ်။ဒီလောက်ပဲ အများကြီးသိပ်နားမလည်တော့ သိပ်မသုံးဖြစ်ဘူး။
Q. ဆိုရှယ်မီဒီယာတွေ ခေတ်စားလာတဲ့အပေါ် ညီမလေးအမြင်ကရော။
အကောင်းနဲ့အဆိုးကတော့ ဒွန်တွဲပြီးရှိတယ်။ ကောင်းတာက ကမ္ဘာကြီးကရွာဖြစ်သွားတယ်။ ကိုယ်သိချင်တာကို အင်တာနက်မှာ အလွယ်တကူရှာလိုရတယ်။ မကောင်းတဲ့အချက်က ကျတော့ အဲဒါတွေပဲသုံးပြီး အချိန်ကုန်သွား တာတွေရှိတယ်။ တစ်ကယ်ဘဝမှာ လိုအပ်တာတွေ ကို မလုပ်ဖြစ်တော့ဘူး။
ဆီးချို၊ သွေးချိုကို တိုင်းတာပေးမယ့် Apple Watch
Ooredoo Myanmar မှ “ပေါင်းကူးဒေတာလက်ဆောင်အစီအစဉ်” ကို ဝန်ဆောင်မှုပေး